Nagarik News - 'टिचरले प्रेमप्रस्ताव राखे'
होमपेज / शुक्रबार / 'टिचरले प्रेमप्रस्ताव राखे'
'टिचरले प्रेमप्रस्ताव राखे'	03 May 2013 शुक्रबार २० बैशाख, २०७०
म पहिलेदेखि नै एकदमै घमण्डी केटी । आफूजस्ती राम्री कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो। सानैदेखि एकदमै चुलबुले पनि थिएँ। पढाइमा पनि एकदमै तेज थिएँ। कक्षा ५ सम्म काठमाडाँैमै पढेकी हुँ। त्यतिबेला मलाई प्रदीप भन्ने केटाले एकदमै मन पराउँथ्यो। तर, म भने उसलाई खासै भाउ दिन्नथेँ। त्यो उमेरमा मायापिरती भन्ने के थाहा हुन्छ र? उसले मलाई स्कुलमा टिकिनसक्ने बनाएको थियो। म जहाँ गए, त्यहीँ आउँथ्यो। भित्ताहरूमा पनि 'नीता लभ्स प्रदीप' लेखिदिन्थ्यो। ब्ल्याकबोर्डमा 'नीता, म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु' भन्ने लेखेर टेन्सन दिन्थ्यो। केटा पनि खासै राम्रो थिएन। अफ्रिकाबाट झरेको जस्तो कालो थियो। मलाई डर लाग्थ्यो उसको अगाडि परेपछि। मलाई देख्यो कि ठूलठूला आँखाले हेर्नेगर्थ्याे। उसका डरले कति दिन स्कुलै गइनँ। घरमा भनिदिएँ। त्यसपछि स्कुलले उसलाई बानी नसुधारेर निकालिदिने धम्की दियो। तबमात्र उसले मेरो पिछा गर्न छाड्यो। स्कुलका भन्दा बाहिरका केटाहरूले मलाई एकदमै मन पराउँथे। कतिले त प्रेम पत्र पनि लेखेर दिएका थिए तर मलाई कोही मन परेन। कक्षा ७ मा पढ्दा मलाई एउटा केटा एकदमै मन पर्थ्यो। ऊ हेर्दा स्मार्ट पनि देखिन्थ्यो र कक्षाको फस्ट ब्वाई थियो। मैले नै उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको थिएँ। उसले पनि मलाई भित्रभित्रै मन पराउने रहेछ। एकैचोटिमा उसले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गयो। यसपछि सुरु भयो हाम्रो, प्रेम कहानी। तर, हाम्रो प्रेम एक वर्ष पनि टिकेन। आठ कक्षामा पुगेपछि ऊ पढ्न अन्तै गयो। कक्षा १० मा पढ्दा मलाई आफ्नै टिचरले मन पराएका थिए। मलाई सबै कुरा सिकाइदिने। जाँचमा पनि सधैँ पास गरिदिने जस्तो काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। म पनि मेरो टिचरलाई मन पराउँथे तर के गर्नु? हाम्रो उमेरले नै नदिने। कक्षा ११ मा पुगेपछि मलाई उहाँले फोनबाट 'आई लभ यू' भनेर प्रेम प्रस्ताव राख्नुभएको थियो तर मैले 'हामी साथीजस्तो भएर बसूँ है' भनेर टारिदिएँ। कलेजमा आएपछि मलाई धेरैले प्रेमप्रस्ताव राखे तर मैले कसैलाई पनि स्वीकार गर्न सकिनँ। आजसम्म मैले आफ्नो सपनाको राजा भेटेकी छैन। Tweet Leaveacomment Message *
भित्री खेल : गणेश थापाको आराम र तरंगहरूपछिल्ला केही महिनादेखि विवादास्पद नेपाली फुटबलमा मंगलवार अर्को तरंग पैदा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाले चार महिनाका लागि फुटबलसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबैखाले गतिविधिबाट...	आफ्नै स्टाइलमा धर्मकर्मअचेलका युवायुवतीले धर्मकर्ममा आस्थै राख्दैनन् भन्ने होइनन्। जतिसुकै आधुनिक या 'रफ एन्ड टफ' भए पनि उनीहरूलाई धर्मप्रति चासो छ। त्यसैले त तन्नेरीहरू माघको ठन्डीमा साली नदीमा डुबुल्की लगाइरहेका हुन्छन्, दक्षिणकालीको...	काली दमिनीदेखि रूपासम्मललितपुरको झम्सिखेलस्थित मोक्ष रेस्टुरेन्टमा सोमवार दिया मास्के आँखामा कालो चस्मा, बुट्टेदार सर्ट्स र कालो पारदर्शी लेगिंग्समा प्रकट भइन्। 'म काली दमिनीलाई भेट्न आएको!' उनको गेटअप हेरेर ठट्यौलो शैलीमा मैले भनेँ।...	कोरियामा नेपालीको बेहालरोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नेपालबाट हजारौँ युवा तछाडमछाड गरिरहेको समयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमवार कोरियामा रहेका आप्रवासी कामदारको अँध्यारो पाटोलाई सार्वजनिक गरेको छ।	सम्पादकीय : ससम्मान समेट जनताको सुझावप्रमुख चार राजनीतिक शक्तिका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि तीव्र गतिमा अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जनताको बीचमा पुर्यााइएको छ। 'सुपर फास्ट ट्र्याक'बाट संविधान जारी गर्ने बताइरहेका मुख्य दलका शीर्ष...	घोषणापत्रः गफै त हो नि सम्धीजी!दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा व्यस्त मुख्य राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गरेका छन्। निर्वाचनका लागि एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदामात्र उनीहरूले घोषणापत्र बाहिर ल्याउन सके। निर्वाचनको 'असारे...	विश्वकप २०१४ : बेजोड र विस्मयकारी !जर्मनीको जीतसँगै सोमबार बिहान रियो दी जेनेरियोको माराकाना रंगशालामा सम्पन्न एक महिना लामो फुटबल महोत्सव सुरु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि विश्लेषकहरूले यो प्रतियोगिताको ८४ वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा भव्य र स्मरणीय हुने...	पानीमाथि बजारसपिङ गर्न तपाईं पैदल अथवा गाडीमा जानुहुन्छ होला। तर, संसारमा यस्ता ठाउँ धेरै छन्, जहाँ सपिङ गर्न डुंगा चढेर जानुपर्छ।	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...